Marc-Vivien Foé Prize 2020: Laacibka reer Nigeria Victor Osimhen ayaa u codeeyay ciyaaryahanka ugu fiican qaarada Afrika ee Ligue 1 - TELES RELAY
Prix ​​Marc-Vivien Foé 2020: Xiddiga reer Nigeria Victor Osimhen ayaa u codeeyay ciyaaryahanka ugu fiican qaarada Afrika ee Ligue 1
SPORTSDADKA & LIFESTYLE
Dhamaadka layli ay curyaamisay mashaakilkii caafimaad ee ku xirnaa Covid-19, qaab ciyaareedkii Lille Victor Osimhen wuxuu uga baxay fursad shaki la'aan. Weeraryahanka reer Nigeria ayaa ku guuleystay 2020-kii daabacaadda Marc-Vivien Foé Prize, oo la siiyay abaalmarinta laacibka ugu fiican Afrika ee xilli ciyaareedkii Ligue 1.
Sidee Ahmed Rahhou u doonayaa inuu sare u qaado xiriirka ka dhexeeya Morocco iyo ...
"Dib u eegista": maxaa dhacaya haddii Trump uu ku waayey doorashadii madaxtinimada ee November? ...
Lix sano ilaa iyo markii Marc-Vivien Foé Prize uusan wali gaarin Nigeria. Sida sanadkii 2014, markii dhalashada Lille Vincent Enyeama loo caleemo saaray, waa koox kale oo Super Eagle ah oo ka dhisan waqooyiga in koobkii loo haystay ciyaaryahanka ugu fiican Afrika ee xilli ciyaareedkii la soo dhaafay Ligue 1 la siin doono.
Dhamaadka xilli ciyaareedkii si hufan loogu guuleystey, in kasta oo hakad la geliyay Covid-19 (13 gool, 4 caawiye ah), weeraryahanka Losc Victor Osimhen shaki kuma uusan gelin shaki la'aan. Isagoo jira da'da 21, wuxuu ku guuleystay kala duwanaanshokiisii ​​ugu horreeyay ee shaqsi aad u ballaaran (284 pts), ka hor inta uusan Algerian ka soo jeedin AS Monaco Islam Slimani (95 pts) iyo Moroccan ah oo ka yimid Stade de Reims Yunis Albelhamid (89 pts).
Xiddiga labaad ee reer Nigeria ayaa loo caleemo saaray ciyaaryahanka ugu fiican Afrika ee L1, sidoo kale waa ciyaaryahankii lixaad ee Lille ee abaalmarintaan qaata, isagoo xaqiijinaya inyar oo khibrad u leh kooxda waqooyiga marka loo eego shaqaaleysiinta dahabka Afrika. Sababtoo ah haddu ahaan lahayd Beljam, woqooyiga sii dheer, in Lille ay raadiso xarunteeda, safka hore ee taariikhda buuqa ee Victor Osimhen ayaa si aad ah looga sii qoraa koonfurta.
Benjamin oo ay walaalo yihiin toddobo caruur ah, waxay ku taal cagaha Olusosun, oo ah meesha weyn ee Lagos ku taalo, in mustaqbalka weerarka Losc uu koray. Markii uu ahaa cunug, wuxuu raacay hooyadiis bartamaha carqaladaha taraafikada ee aan dhamaadka lahayn si ay u iibiyaan dhowr sacadood oo biyo ah oo ay helaan wax ay cunaan.
Laga soo bilaabo galley ee magaalada Lagos ilaa taariikhda adduunka
Nolol maalmeed hore u adag oo sii adkaanaysa, dhawr sano ka dib, dhimashadii hooyadiis. Intii hawshu socotay, aabihiis shaqadiisa waa laga xayuubiyey. Cayaaryahanka uu iska leeyahay, qoysku malaha dooro waana inay "isku dhegaan" si ay uga baxaan. Andrew, walaalkiis weyn, oo sidoo kale xiiseynaya kubada cagta, ayaa qadka soo dhigaya riyooyin mustaqbalkiisa ah si uu u iibiyo wargeysyada. Laakiin Victor wuxuu ku hayaa yoolkaas gadaashiisa maankiisa, xitaa haddii waqtigiisa intiisa badan uu shaqeeyo.
Dhowr sano kadib, taariikhdiisa waxay qaadatay waji muhiim ah. Sida kumanaan kun oo dhalinyaro ah waqtigaas, dhallinyarka ayaa la tijaabiyaa halka Nigeria ay rajaynayso inay ku buuxiso lambarada xulashadeeda qaran ee dhalinyarada. Emmanuel Amunike, halyeeyga kubada cagta Nigeria iyo 17 jirada Super Eagles, ayaa iska ogolaanaya inuu ku qanciyo kartida da 'yarta, wuxuuna go'aansaday inuu u qaado isaga oo u tartami doona koobka qaramada Afrika ee da' ahaan.
The CAN-2015 U17 (U17), waa dhacdo aasaasi u ah Victor Osimhen, maadaama uu halkaas ku dhaliyay afar jeer oo uu ku dhameystay gooldhaliyaha ugu sareeya tartanka. Caqli ahaan, wuxuu sii wadaa ugaarsiga Amunike wuxuuna ku tartamayaa U17 Koobka Adduunka. Toban gool ka dib - rikoor - Osimhen wuxuu ku tuuray dhalinyarada Nigeriya ee adduunka ugu sareeya. Hadana prodigygu wuxuu soo jiidanayaa afarta gees ee Yurub.
Jarmalku wuxuu kuyaala sagxadda derbiga, ka dibna jabinta Biljamka
Ugu dambeyntii waxay ahayd Wolfsburg oo garaacday jabaqda iyada oo la saxeexday degenaanshaha Xarunta Ultimate Strikers Academy, bilowgii 2017, kadib markii ay aasaastay heshiis horudhac ah 2016. Fikrad ahaan ugu yaraan, tan iyo markii ay dhibaatadu dhacday Uruurinta dhalinyarada. Isagoo hoos u dhigay dhaawacyada iyo la qabsiga qalafsan ee Jarmalka, wuu ku guuldareystay inuu isdilo, ama xitaa inuu helo waqti ciyaareed muhiim ah (kaliya shan iyo toban dhamaadka kulamada).
Iyo xagaagii 2018, markii uu si ku-meel-gaar ah dalka ugu soo noqday si uu u soo arko qoyskiisa, waxa uu cudurka duumada ka qaaday ka hor inta aanu ku soo noqon Jarmalka. Lama diyaarin bilowga xilliyeedka dhalinyarada da'da yar, taasoo lagu qasbay inay ku daawadaan karantiil caafimaad oo Wolfsburg ah.
Hogaamiyaasha Jarmalka, guuldarradu uma muuqdaan inay shaki ku jiraan. Waxaa lagu siiyaa amaah kooxo dhowr ah oo reer Belgium ah, sidaa darteed Osimhen wuxuu degay Charleroi, kalsooni darri iyo qaab gaaban. Howlgalku dhamaantiis waa qatar halis ah. Laakiin seddex usbuuc gudahood, ciyaaryahanka ayaa ugu dambeyntii maamula si uu u bedelo qaabkan. Markii loo eego kulamadii ugu horreeyay ee Horyaalka Jupiler, iska-horimaadyada muuqda: Naadiga reer Belguim ayaa nasiib wanaagsan nasiib u yeeshay.
Osimhen si dhaqso leh ayuu uga soo kabanayaa xaaladiisa jir ahaaneed, laga bilaabo Sebtember, wuxuu ku guuleystaa 11-kii heystaha ah inuusan waligiis ka tagin. Rikoorkiisa ayaa ka dhigaya mid ka mid ah farsamayaqaanada ugu caansan hanashada horyaalkiisa, isagoo dhaliyay 19 gool xilli ciyaareedkii 2018/19.
Si aan qarsoodi ahayn, ikhtiyaarka iibsiga ee ay wada xaajoodeen Charleroi markii ciyaaryahanka amaahda lagu siiyay waxaa la isticmaalay xagaaga soo socda. Naadiga reer Belgium ayaa bixisa 3,5 milyan oo yuuro ah oo ay dalbatay Wolfsburg ka dibna waxay iibineysaa ciyaaryahanka Lille, iyadoo lagu bedelayo XNUMX milyan euro.
Lille iyo tii hore ee Pépé
Dhanka Losc, ujeedadu waa sahlan tahay: hel bedelka Nicolas Pépé - Prix Marc-Vivien Foé 2019 - kaasoo 22 gool uu dhaliyay xilli ciyaareedkii 2018/19 u ogolaaday kooxda inay raadiso booska 2aad ee Ligue 1 Waxaa lagu xukumay meelkasta oo Yurub ah, ciyaaryahanka reer Ivory Coast ayaa markaa ka tagaya woqooyiga Faransiiska si lama filaan ah, wuxuu u jihaysan yahay Arsenal iyo adduun dhan 80 milyan oo yuuro.
Khafiifinta dhaqaale ee wanaagsan waa mid aan la dafiri karin, laakiin khasaaraha isboorti wuxuu ballan qaadayaa inay adag tahay in la magdhabo. Laakiin weli… Kulankiisii ​​ugu horreeyay, ee uu ka hortagayo FC Nantes, Osimhen wuxuu u saxeexay labo jeer furitaanka Ligue 1. Ka dib kulankii Saint-Etienne, laba maalmood ka dib, isla qiimahaas. Bilaabashadu waa onkod, iyo hadhaagga dheelitirka dhamaadka xilli ciyaareedka, xitaa waxaa curyaamiyay xiisadda caafimaad ee ku xirneyd Covid-19, waxay xaqiijineysaa sida ay wax u socdaan (13 gool iyo 4 caawin 27 kulan).
Isagoo kahadlaya cawska, ciyaaryahanka sidoo kale waa mideysan yahay banaanka. Wareysi lala yeeshay La Voix du Nord, dhakhtarkii hore ee Losc Patrick Flamant, wuxuu tusaale usoo qaatay wiil "aad u go'an" iyo "had iyo jeer ciddiyaha". Waxa uu yiri: "Waxay dareemeysaa inaysan waxba aheyn laakiin kubada cagta ayaa jirta meesha xigta," ayuu yiri. Jacaylkani wuxuu u muuqdaa inuu ka adkaaday taageerayaashii Lille, oo isaga u doortay "Mastiff of the xilli", Juun 2. "Saaxiib" dadweynaha ah, xitaa isagoo u barooranaya geeridii aabihiis maalmo ka hor, tan iyo markii uu ku guul darreystay inuu dib u caddeeyo jaceylka uu u qabo naadiga.
Laga soo bilaabo halkaas si ay u awoodaan inay caddeeyaan in Osimhen uu noqon karo murashax u tartami doona isku xigxiga xilli ciyaareedka soo socda? Ma hubo sidaa, maxaa yeelay dalabyada waxay ka buuxinayaan miiska hogaamiyayaasha Lille. Naples, Liverpool, iyo magacyada kale ee waa weyn ee qaarada yurub waxay u muuqdaan inay diyaar u yihiin inay jabiyaan baanka bankiga udhaxeeya - inta udhaxeysa 40 iyo 80 milyan euro - si ay u awoodo adeega reer Nigeria. Aqbalitaanka madaxweynaha Losc, "ballaaran" ee musharixiinta waxay ka imaan doonaan "saddex horyaal oo kaladuwan". Shaki kuma jiro in sida sanadkii hore oo kale Nicolas Pépé, Lille ay ku adkaan doonto inay diidaan dalabkan waxtarka leh.
• Soosaarista dhameystiran ee Prix Marc-Vivien Foé 2020:
iyo Idrissa Gueye (Senegal - Paris SG) ► 37 pts
Sidee Waqooyiga Fog ugu diyaargaroobayaa muddada ka dambeeya Biya-da
Shirka Cimilada: Faransiisku wuxuu ku yaboohay 15 bilyan oo yuuro "beddelka deegaanka"